यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे ! – Tufan Media News
यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे !
४ चैत्र २०७७, बुधबार १७:३०
जिन्दगी छ भने मृत्यु पनि छ । अनि मृत्यु जस्तो कारणबाट पनि हुनसक्छ । आउनुस् पढौं, मृत्युका अनौठा कारणहरू :
डियोड्रेन्टबाट मृत्यु : सन् १९९८ मा इंग्ल्यान्डका एक १६ वर्षीय युवकको सुगन्ध छर्ने डि’योड्रे’न्ट प्रयोग गरेका कारण मृत्यु भयो । मुटुको समस्या भएको उक्त युवक डि’योड्रे’न्टको अ’त्यधिक प्र’योगका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भयो ।
दाह्री का’ट्दा मृत्यु : अस्ट्रियाका हान्स स्टेनिंगरको संसारकै सबभन्दा लामो दाह्री थियो । सन् १५६७ मा दाह्री मिलाउँदै गर्दा उनको बस्तीमा आगो लागेछ । भाग्ने क्रममा आफ्नै दाह्रीमा अल्झिएर उनको घाँटी भाँ’चिएर मृत्यु भयो ।
ब्राका कारण मृत्यु : सन् १९९९ मा इंग्ल्यान्डमा दुई महिला पार्कमा टहल्दै गर्दा अचानक पानी पर्न थाल्यो अनि उनीहरू रुखमुनि लुके । त्यतिखेरै च’ट्या’ङ परेपछि उनीहरूको ब्रामा रहेको धातुबाट करेन्ट लागेर दुवैको मृत्यु भयो ।
हाँस्दाहाँस्दै मृत्यु : ग्रिसेली दार्शनिक क्राइसिप्पस अफ सोलीले गधालाई अफिम खाएको देखेर हाँस्न शुरु गरेका थिए । उनले आफ्नो हाँसो रोक्नै सकेनन् र हाँस्दा हाँस्दै मृत्युवरण गर्न पुगे ।
छुन नहुने भएर मृत्यु : उन्नाईसौं शताब्दीमा थाइल्यान्डकी महारानी सुनन्दा कुमारीरत्नालाई कसैले छोएमा मृ’त्यु’द ‘ण्ड’को सजाय हुन्थ्यो । एकचोटि समुद्रमा डुंगा पल्टिएर उनीसहित केही मानिस डु बे । तर उनलाई छुन नहुने आदेश भएकाले कसैले पनि बचाउन जाने साहस गर्न सकेनन् । बीस वर्षको उमेरमै उनले मृत्युवरण गर्नुप-यो ।
गाजरको जुस पिएर मृत्यु : बासिल ब्रा’उन शा’रीरिक सुगठनमा विश्वास राख्ने व्यक्ति थिए । फिट रहनका लागि उनी हरेक दिन एक ग्या’लन गाजरको जुस पिउँथे । धेर जुस पिएरै उनको मृत्यु भयो ।
फोहोरको डं’गुर देखेर मृत्यु : अमेरिकाको कोलियर ब्रदर्शले २० वर्षको हुँदा भाडामा एउटा घर लिएका थिए । त्यो घरमा यति फोहर थियो कि निकाल्दा निकाल्दा त १८० टन फोहोर पो निस्क्यो । त्यत्रो डंगुर देखेरै उसको मृत्यु भयो ।
चन्द्रमालाई चुम्बन गर्ने हुँदा मृत्यु : प्रसिद्ध चिनियाँ कवि ली बाइ प्रकृतिप्रेमी थिए । उनलाई चन्द्रमा चुम्ने प्रबल इच्छा थियो । त्यति परको कुरो कसरी चुम्नु अब ? त्यसपछि उनले पोखरीमा गएर चन्द्रमाको प्रतिबिम्बलाई भएपनि चुम्ने विचार गरे । यस क्रममा उनको नाउ पल्टियो र उनी पोखरीमा डु’बे अनि त्यहीँ म’रे ।
उपहारले थिचिएर मृत्यु : प्राचीन ग्रिसको एथेन्स राज्यका सांसद ड्राकोको एजिना थिएटरमा उनका प्रशंसक नागरिकहरूले दिएको लुगा र टोपीको डं’गुरमा थि’चिएर मृत्यु भयो ।
माछा उ’फ्रेर मृत्यु : तान्जानियाका एक माझी रोबर्ट म्वाइवेगाले पक्रेको एउटा माछा उनको हातबाट फु’त्किएर मुखभित्र पस्न पुग्यो । भित्र त्यो माछो खु’म्चिएर छातीमा पुग्यो र सासै रोकिएर उनको मृत्यु भयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा फेरी बज्न
एसईई नतिजा यी मितिभित्र
कहाँ छन युटुबर भाग्य
साउदीमा दु’र्घटना हुँदा धनकुटाका
असोजमा बिहे हुँदैथियो यी
इजरायलले माग्यो एक हजार